မာန်နတ်၏ဩဝါဒနှင့်ပရိယာယ | Demonic Doctrines and Devices | Real Conversion
၂၀၁၂၊ဇွန်လ၃ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်း တော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအ
“ထိုကြောင့် ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ရွင်လန်းကြလော့။မြေကြီး နှင့်ပင်လယ်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား မာန်နတ်သည် မိမိ အချိန်တစ်ခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟု ဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏ (ဗျာဒိတ်၁၂း၁၂)၊
ဤကျမ်းစာတော်မြတ်အနာဂတ်တွင် ပြည့်စုံမည်ကို ကျွန်ုပတို့အား ကြိုတင်ဟော ကြားခြင်းဖြစ်သည်ကို ကျွုန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြည့်စုံလာမည် ဖြစ်သည်။ ရှေ့ကျသာသမ္မာကျမ်းစာများက ထိုကဲ့သို့ အကြောင်းအရာဖြစ်လာမည် မှတ် တမ်းတင်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အား ဖြင့် မောရှေရေးသားသောကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘီစီ၁၅၂၀လောက်တုန်းက ရေးသား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယောဘသဝတ္ထု၌ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ၊ စာတန်သည် ယုတ်မာကြမ်း ကြိုတ်သောအမျက်ဒေါသဖြင့် ဆင်းသက်လာမည်ဟုရေး သားမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြိုတင်မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်းတို့သည် မှန်ကန်နေပါသည်။ ထိုဖေါ်ပြခြင်းတို့သည် ဤနောက်ဆုံးသောကာလနှင့်ပို၍ ပါတ်သက်မှုရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံး သောကာလနှင့်နီးလေလေ၊ စာတန်၏အမျက်ဒေါသသည်လည်း ပို၍ကြီးလေလေဖြစ်နေ ပါသည်။ အပြစ်နှင့်ကန်းနေသော သူတို့သည် ထိုပရောဖက်ပြုချက်တို့ကို မသိနားမလည် ဖြစ်နေသည်ကို စာတန်သိနေသဖြင့် အချိန်ကုန်ဆုံးချိန်နီးနေသည်နှင့်အမျှ စာတန်သည် လူသားထုတစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေပါသည်။ စပါဂျန်ahပြာကြားခဲ့သည်မှာ၊ “နောက်ဆုံးသောအချိန်နာရီရောက်နေပြီဖြစ်၍ မကောင်းဆိုးဝါးရှေ့မြွေဟောင်းနဂါးမင်း ကြီးသည် အမျက်ဒေါသသည်းထန်နေသည်ကို ထောက်သော်၊ နောက်ဆုံးသောကာလ ရောက်ပြီဟူသော ပရောဖက်ပြုချက်သည် ပြည့်စုံနေပါပြီ။” (C. H. Spurgeon, “စာတန် ၏ အမျက်ဒေါသ” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume XXV, p. 616). ထိုသို့သော သတိပေးစကားကို ရှင်ပေတရု ထပ် ခါထပ်ခါသုံး မှုန်းပြီးသတိပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
“သမ္မာကျမ်းသတိရှိလျှက်မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ရန်သူမာန် နတ်သည်၊ ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကိုမျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏ (၁ ပေ၅း၆)။
ဂရိဘာသာစကားဖြင့် ကို မျိုသည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုပါသည်။ “စာတန်သည် နောက်ဆုံးသောကာလသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ကို သိသဖြင့်” ပြင်းထန် သောအမျက်ဒေါသဖြင့် မာန်နတ်သည်ဟိန်းဟောက်လျှက်လှည့်လည်နေပါသည်။ မာန် နတ်သည် ဟောက်သောခြသေ့Fပမာ လမ်းမလှည့်လည်လျှက်မျိုရမည့် သားကောင်ကိုရှာ ဖွေနေသကဲ့သို့ မည်သူကိုမျိုရမည်ကို ရှာဖွေနေပါသည်! “မာန်နတ်သည် မိမိအချိန်ခဏ သာရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသော ဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းနေပြီ”
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် မူဆလင်တိုင်းပြည်၌ အသက်ရှင်ကြရမည်ဆိုလျှင်၊ မာန် နတ်အပေါင်းအပါ၏ ဘာသာတရား၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဤတရားဒေ သနာတော်ကို ကြားနာဖတ်ရှုသော၊ ထိုသို့နိုင်ငံ၌ရှိသူတို့လည်း၊ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတ ရားကြောင့် ဝိညာဉ်ကျန်းမာခြင်းရရှိပါမည်။ လောကီပညာရေးပါမောက္ခတို့က ထိုအမှန် တရားကို သံသယရှင်းလင်းစွာ ငြင်းဆန်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း အားဖြင့် ကျန်းမာစေနိုင်သည်ဟူ၍ သုတမရှိသောနိုင်ငံတို့တွင်လည်း မူဆလင်နိုင်ငံသည် ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေပါသည်၊ (see Under the Influence; How Christianity Transformed Civilization, by Dr. Alvin J. Schmidt, Zondervan, 2001).
ကျွန်ုပ်တို့၌ ဧဝံဂေလိအခြေခံအုတ်မြတ်ဆွေ့မြေသွားသည့်တိုင်၊ စာတန်သည်အမျက် ဒေါသကြီးစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ခိုက်နေပါသည်။ တိုင်းနိုင်ငံတို့ကို အုပ်ချုပ်နေသော နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတို့ကလည်း မာန်နတ်ပရိယာယ်တို့အားဖြင့် ခရစ်ယာန်အကျင့်စရိုက် များကို ကြီးမားစွာတိုက်ဖျက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ “မာန်နတ်သည် မိမိအချိန်ခဏသာရှိ သည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းလေပြီ” ဟူသော ကျမ်းသည် ယ္ခုကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်စဉ်၌ပင် ပြည့်စုံလို့လာပါပြီဟု ခံစားမိသည်။
ဤတရားဒေသနာတော် မည်ကဲ့သို့စာတန်သည် အမျက်ထွက်လျှက်ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ လာနေသည်ကို ကျွန်ုပ်ဖေါ်ပြပါမည်။ (၁)စာတန်မာန်နတ်၏အယူဝါဒများနှင့်(၂)စာတန် မာန်နတ်၏ပရိယာယ်တို့ကို ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ အစ္စလမ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့မဟုတ် ဟိန္ဒုဘာသာတို့ကို အဓိကထားပြီးဖေါ်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ထိုဘာသာတရားတို့သည် မာန် နတ်တို့နှင့်ဆက်နွယ်ပါတ်သက်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတို့၌ စာတန်မာန် နတ်၏ ခံယူချက်ဝါဒနှင့်ပရိယာယ်ပျံနှံ့နေပြီး တတိယနိုင်ငံတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ် သည်။
၁။ ပထမ၊ မာန်နတ်သည်မိမိ၏ခံယူချက်နှင့် ဝိညာဉ်ဆိုးများကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားထဲ စေလွှတ်ထားပါသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ကြိုတင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
“ဝိညာဉ်တော်သည် အတည့်အလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကား၊ ဗနာင် ကာလ၌ ဩတ္တပစိတ်တွင်သံပူခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်၊ မုသာစကားကိုပြော တတ်သောသူတို့၏ ဟန်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် လူအချို့တို့သည်ယုံကြည် ခြင်းကို စွန့်ပယ်၍လှည့်ဖြားတတ်သော ဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ နတ်ဘုရားတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်း၊ မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်’ ‘(၁တိ၄း၁)။
“ဝိညာဉ်တော်အတည့်အလင်းများဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကား” ဆိုရာတွင်သူစကားပြော ခြင်း၊ ထူးဆန်းစွာစကားပြောခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်(အထူးသဖြင့်)၊ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်က၊ ရှင်းလင်းပြီး အထူးသဖြင့် “နောင်ကာလ၌ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်”ကို အတည့်အလင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကမ္ဘာလောကကြီး၏နေ့ရက်အဆုံး၌ ခရစ် တော်မပေါ်လာခင်ထိုကဲ့သို့ ကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်၊ ဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်သည်။ “နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်ကြလိမ့်မည်။” (ယုဒ၃) ယနေ့ခေတ်ဆိုးကြီးထဲ လူအချို့တို့သည် ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်နေကြပေပြီ။ “နောက် ဆုံးသောကာလ”၌ လူအချို့တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ပေးအပ်ထားသော ယုံကြည် ခြင်းမှမှားယွင်းစွာလမ်းလွဲစေသူ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ဓမ္မသစ်ကျမ်း ကိုရိုးရှင်းစွာသွန်သင်ခြင်းမှ သွေးဖီပါလိမ့်မည်။ “လမ်းလွဲစေသောဝိညာဉ်ဆိုးနှင့်ဩဝါဒကို သတိပြုပါ”။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အားမှားယွင်းစွာ သွန်သင်ခြင်းကြောင့်၊ သမ္မာကျမ်း စာပါခံယူချက်မှလမ်းလွဲစေမည်ဖြစ်သည်။ “နောက်ဆုံးသောကာလ” မာန်နတ်ဆိုး၏သွန် သင်ချက်ဖြစ်သော မှားယွင်းသောဩဝါဒနောက်သို့ လိုက်လျှောက်ကြပေပြီဖြစ်သည်။ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် “သမ္မာတရားကိုနားမထောင်ဘဲ၊ ဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်၍ လွဲ သွားကြလိမ့်မည်” (၂တိ၄း၄)၌ သတိပေးထားပါသည်။
တမန်တော်ကြီးက မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်အကြောင်းကို အချက်နှစ်ချက်အား ဖြင့်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ “မာန်နတ်၏ဩဝါဒ” ဆိုရာတွင် ဓမ္မသစ် ကျမ်းစာတော်ကို လွဲမှားစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် စာတန်မာန်နတ်သည် ရိုးရှင်း စွာသမ္မာကျမ်းစာတော် သင်ကြားခြင်းကို အကျိုးမာန်တက်လျက်မာတင်လုသာပြောကြား သကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်နေပါသည်(၁၄၈၃-၁၅၄၆)။
ဘုရားရှင်၏နုတ်ကပတ် သမ္မာကျမ်းစာတော်ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ စာတန်မာန်နတ်သည် မာန်တက်လျှက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ မာန်နတ်သည် စယ်ကြယ်သam ဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်အောင်ယားတယ် သောနား၊ မိမိတပ်မတ်ခြင်းအတိုင်း များပြားသောဆရာနောက်သို့လိုက် စေသည်။ တကယ်တောမာန်နတ်သည် ခွန်အားဖြင့်တိုက်ခိုက်၍မရနိုင် သဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းနည်းလမ်းကို သုံးပြုတိုက်ခိုက်ပါသည်။ (What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, p. 395).
စာတန်မာန်နတ် ချပေးထားသော “နတ်ဆိုးအပေါင်းအပါတို့၏ဩဝါဒ” တို့သည် ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပျံနှံ့နေပါသည်။
၁။ ကြောင်းကျိုးကို အခြေခံ၍တွေးခေါ်သောဝါဒသည် နုတ်ကပတ်တော်သ မ္မာကျမ်းစာကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိပါသည်။ (၁၇၂၅-၁၇၉၁) ယောဟန်ဆမ်လာသည် သမ္မကျမ်းစာတော်ကို ဝေဖန်သူတို့၏ဖခင်တစ် ဦးဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ခွဲပါသမျှသည် ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းထားသော နုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဟု သွန်ကြားပါသည်။ သူသည် သမိုင်းစဉ်ဆက်ဝေဖန်မှုနည်းလမ်းသစ်ကို စတင်ဖန်တီးသူဖြစ် သည်။ ဆမ်လာက၊ လူသည်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပိုင်းကို ယုံကြည်သက် ဝင်နိုင်ပြီး၊ ကျန်သောအပိုင်းကိုမူ ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်ဟူ၍ သွန်သင်ပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ပါ နုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင် ၏နုတ်ထွက်စကားမဟုတ်ဟု ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သူ၏နည်းလမ်းသည် ယနေ့မျက်မှောက်ကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသော “လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သော ဘာသာရေး (Lငဘနမal လငနတ) ဖြစ်သည်။ လွပ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သော ဓမ္မဗေဒပညာရှင်တို့က သမ္မာကျမ်းတော်၌ ပါဝင်သမျှ ကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည့်ပါဟုဆိုကြ၏။ ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ဧ၀ကိုးစား တန်က ဧဒင်ဥယျဉ်၌ ထိုကဲ့သို့လိမ်လည်ပြောကြခဲ့ဖူးသည်။ “အကယ်စင် စစ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသလော့” ဟူ၍ အကွက်ဆင်လိမ်ညာခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၃း၁)။ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရကြသည့် အကြောင်းမှာကမ္ဘာဦးမှစ၍ ဘုရားနုတ်ကပတ်တော်ကို စာတန်လိမ်လည် လှည့်ဖျားခြင်းရောဝင်လျှက် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကျမ်းစာ တက်ရောက်သောအခါ စာတန်မာန်နတ်၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုနှစ်ကြိမ် တိုင်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ မသွန်သင်သမျှ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်တိုက်လှန်ဖို့ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့စာတန် မာန်နတ်၏တိုက်ခိုက်ခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ဖြင့်အနိုင်ယူခဲ့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ပါသမျှသည် “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားသော ဘုရားစ ကား” ဖြစ်သည် (၂တိ၃း၁၆)။ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သော ဘာသာရေး သမားတဦးသည် “မာန်နတ်၏ဩဝါဒ” အားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို ဖျက်ဆီးမှောက်လှန်ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို တိုက်လှန်ကာကွယ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး အားစာတန်က တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်ကြားသိခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်ုပ် နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ဒေါက်တာဂျေ၊ ဂရက်စ်ရှန်ကမ် ဆန်သည် သမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားကို ကာကွယ်သောကြောင်း ပရေစ် ဘီတေးရီးယန်းအသင်းတော်မှ နုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အသိ သူငယ်ချင်းဒေါက်တာအီရုဒ် လင်ဆေးလ်နှင့် ဒေါက်တာဘီလ်ပေါဝေလ် တို့နှစ်ယောက်လည်း သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို ကာကွယ်ခဲ့ကြသောကြောင့် တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ အရှက်ခွဲခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ မဈ္ခုရီဆီ နောတ် သင်းအုပ်ဆရာလည်းဖြစ်၊ စာရေးဆရာလည်းဖြစ်သူ ဟာမန်အို တန်သည် စာတန်မာန်နတ်၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အနှစ်ငါးဆယ်တိုင်တိုင ခံခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာ၊ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားတော်ကိုခုခံကာ ကွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ခုခံကာကွယ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ဘုရားသခင် ကသာခွန်အားကို ပေးတော်မူခဲ့သည်! ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတို့က ဤလူတို့သည် “အထူးအခန်း” လူတွေ၊ မျက်ကန်းသမားတွေဟူ၍တွေး ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့ထင်ထားသော ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ တိုင် “အထူးအခန်း”ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နုတ် မြွတ်စကားတော်များကို ကာကွယ်သောကြောင့် စာတန်တိုက်ခိုက်နေခြင်း ဖြစ်သည်ကို ခရစ်ယာန်ဘန်းကြီးများနားမလည်းခဲ့ကြချေ။ စာတန်မာန် နတ်သည် ယနေ့မျက်မှောက်ကာလ၌ အမှန်တရားရောနှောပြီးလုပ်ဆောင နိုင်သည်ကို ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများ ကန်းနေကြသည်။ကြောင်းကျိုး ကိုအခြေခံ၍ တွေးခေါ်သောဝါဒဖြင့် ကျမ်းစာတော်မြတ်ကို ဝေဖန်အပြစ် ရှာခြင်းသည် “နတ်ဆိုးအပေါင်းအပါတို့၏ဩဝါဒ” ပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်နည်းဟု သင်မေး ကောင်းမေးပါလိမ့်မည်။ အဖြေရှိနေပါသည်။ တိုတောင်းလှသောလွန်ခဲ့ သောနှစ်နှစ်ရာခန့်က ရာနှုန်းပြည့်အားဖြင့် အနောက်နိုင်ငံသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏နုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ “ညာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ပြည့်စုံခြင်း” တခုတည်းအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာတော်အမှန် တရားကို မှားယွင်းစေနိုင်ပါသည်။ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်လမ်းပေါ်ရှိ လူသားတို့အားလုံးက သမ္မာကျမ်းစာသည် များသည်ဟုယူဆကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အားဖြင့် မာန်နတ်သည် နုတ်ကပတ်တော်၏ အမှန်တရားကိုနုတ် ပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၏ အမှန်တရားကိုပြသလိုပါ သည်။ သင်လည်းအမှန်သော်၎င်း၊ အမှားသော်၎င်းသင်အကြိုက်မေးခွန်း ထုတ်မေးမြန်းနိုင်သည်။ ယခုတွင် မယုံကြည်သူတို့ကိုဆွဲခေါ်ပြီး ဘုရား သခင်ကို ယုံကြည်ခိုင်းဖို့ အလွန်အင်မတန်ခက်ခဲ့နေပါသည်။ လူအပေါင်း တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို အတူတကွဆန့်ကျင်နေကြပေပြီ။မာန်နတ် နှင့်အပေါင်းအပါတို့၏ဩဝါဒက ကျွန်ုပ်တို့၏ နုတ်ကပတ်တော်သမ္မာတ ရားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ ဒါဝီ၏အတွေးအခေါ်အယူဝါဒက လူသား၏ဗီဇလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်းကို တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ (၁၈၀၉-၁၈၈၂)ချားလ်ဒါဝင် သင်ကြားရာ၌ လူ့ဘ၀ သည်အဆင်းအတန်းနိမ့်ကျပြီး ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော် မြတ်က ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်းသည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ “ထာ၀ရအရှင်ဘုရားသခင်သည် မြေမှုန့်ဖြင့် လူကိုဖန်ဆင်း၍” (ကမ္ဘာ၂း၇)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ဒါဝီအယူဝါဒ သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို ငြင်းပယ်သည်သာမက လူသည်အဆင့် တန်း”နိမ့်ကျသော”ပုံစံဖြင့် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏၊ ဒါဝီအယူဝါ ဒသည် “မာန်နတ်၏ဩဝါဒ”နှင့်အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ “အကြောင်း မူကား၊ တယောက်သောသူသည် နားမထောင်သောအားဖြင့် လူများ တို့သည် အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ၊ တယောက်သောသူသည်နား ထောင်ခြင်းအားဖြင့် လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏” (ရောမ၅း၁၉)ဟူ၍ ပါသောလူနှင့်ပါတ်သက်၍ မိန့်ကြားကျော်မူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်း၊ ဝါဒကလျှော့ပေါ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝီ အယူဝါဒကသမ္မာကျမ်းစာတော်၏ အမှန်တရားကို တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် “မာန်နတ်အပေါင်းတို့၏ဩဝါဒ”ပင်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ရာခန့်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကို ဘုရားသခင်အထူး ဖန်ဆင်းထားသည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံကြပါသည်။ ယနေ့တွင်လူအများတို့ တို့က ကျွန်ုပ်တို့သည်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းဝါဒကကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်လာပါသည်။ အကယ်၍ သင်ကလည်း ကျွန်ုပ်သည်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မည် ဆိုလျှင် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖေါ်ပြထားသော ကယ်တင်ခြင်းသည် လည်း သင့်အဖို့အဓိပ္ပါယ်ရှိမည်မဟုတ်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဒါဝီအယူဝါဒ သည်နတ်ဆိုးအပေါင်းအပါတို့၏ ဩဝါဒဖြစ်သဖြင့် စာတန်သည်လူသား စင်စစ်တို့ကတိရစ္ဆာန်အုပ်ပမာ၊စားသောက်ဖို့ ထိမ်းမြားစုံ ဖတ်ဖို့အတွက်သာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီး မြင့်မြတ်သောရည်ရွယ်ချက်တိမ်ကော စေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ “စားသောက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြှားစုံဖက်ခြင်း”ဆိုခြင်းထက်သာလွန်သောဘ၀ရည် ရွယ်ချက်သိမြင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ထိတို့ဖို့လိုပါသည်။
၃။ အပါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်ဘာသာ အယူဝါဒသည် လူတို့၏ဗီဇအပြစ်နှင့်လုံး ၀ဥဿုံပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကိုဆိုင်ရာ သမ္မာကျမ်းစာကို တိုက်ခိုက်နေပါ သည်။ ချာလ်ဂျီ့ဖိုင်နီး(၁၇၉၂-၁၈၇၅)၏ ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသောအတွေး အမြင်သည် “လူသားတို့၏ဆန္ဒလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်လူသည် မိမိတို့၏လုပ်ချင်ရာကို လုပ်နိုင်သောအစွမ်းအစရှိပါသည်။” (Finney's Lectures on Systematic Theology, Eerdmans, 1969 edition, p. 325). ထို့သို့ဖြင့် ဖိုင်နီးသည် ရှေ့ခေတ်ကမှားယွင်းသောပလေဂျီမ်ဝါဒကို ကျယ် ပြန့်အောင်လုပ်ဆောင်နေပါသည် (c. 354-418 AD). လူ၏ဗီဇအပြစ်ကလူ သားတို့၏ရွေးချယ်ခွင့်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်သည်ကို ငြင်းပယ်သည့်အ ပြင် လူသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်မပါဘဲ၊ လွတ်လပ်စွာမိမိတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုဆို၏။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌မိန့်တော် မူသည်ကား “သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်၀တော်မူသော ဘုရား သခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်၊ ဒုစရိုက် ပြစ်၌ သေလျှက်ရှိနေသော ငါတို့kကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မ ပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ (ဧဖက်၂း၄-၅)၊ ဟူ၍မိန့်တော်မူပါသည်။ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျှောက်ရောက်သည်မဟုတ် ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ် တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှဝါကြွားစ ရာအခွင့်မရှိ”(ဧဖက်၂း၈-၉)။ ဖိုင်နီး၏ “အပါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်ဘာသာအ ယူဝါဒသည် ဖေါ်ပြထားသော သမ္မာကျမ်းစာကို ဆန့်ကျင့်နေသဖြင့် “မာနတ်အပေါင်းအပါတို့၏ ဩဝါဒ”ပင်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်နီးဝါဒကို အများသော သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် လက်ခံကျင့်သုံးကြပြီး၊ အသင်း တော်၌ အသစ်ပြောင်းလဲလာသောသူများကိုလည်း မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ အသင်းသူ^သားအဖြစ်လက်ခံသင်းဝင်စေသည်။ ဧဝံဂေလိတရားဟော ဆရာဒေါက်တာအာဆာဟီလ်နက်လက်တန်က ဖိုင်နီး၏ဝါဒကို ဆန်ကျင့် ပြီး”အပါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်ဘာသာအယူဝါဒ”ဖြစ်သော “ဖိုင်နီး၏အမှုတော် မြတ်၌ ပြောင်းလဲလာသော ယုံကြည်သူများ အန္တရယ်ကျရောက်နေဟူ၍ မရှိပါ”ဟူသော ဖိုင်နီး၏ပြောစကားကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြောစကားကိုထောက်သော်၊ ဖိုင်နီးသည် စာတန်ပရိယာယ်ထဲကျရောက်နေ သည်ဟု သိမြင်ပုံမပေါ်ပေ။ ဤတွင် တရားဟောဆရာတို့အဖိုးစစ်မှန်သော ပြောင်းလဲသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို ခွဲခြားတတ်ဖို့ရန်တာဝန်တရပ်ပင်ဖြစ် သည်။ (Bennet Tyler and Andrew Bonar, The Life and Labours of Asahel Nettlenton, Banner of Truth, 1975, pp. 367-368) . ဖိုင်နီး၏ “မာန်နတ်အပေါင်းအပါတို့၏ ဩဝါဒ”ကြောင့် သန်းနှင့်ချီသောသူတို့မှား ယွင်းသော အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းထဲသို့ ရောက်ရှိနေကြပေပြီ။
“အပေါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝါဒ”သည် အခြေအနေတရပ်လုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ယေဘုယျအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဟုခေါ် ဆိုသော သူတို့သည် စိတ်နှလုံးသားထဲက ယုံကြည်ကြပြီး၊ ဆုတောင်းကြ သည်။လက်သီးလက်မောင်းမြောက်ပြီး၊ဘီးမွမ်းသီဆိုကြသည်၊ (၁၆၂၈- ၁၆၈၈)နှစ်ခြင်း လက်ဦးဆရာ ဂျွန်ဗန်ယန်ကျ ထိုကဲ့သို့သောသူတို့သည် ခရစ်ယာန်ဟုခေါ်ခြင်းကား “သင်သည်ကလေးလာစားစရာကဲ့သို့ ပြောင် လှောင်ခြင်း”ဖြစ်သည်။
ဤ”နောက်ဆုံးသောကာလ”၌၎င်း ခံယူချက်သုံးခုကြောင့် လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်နှစ်ခု တိုင်း၊ စာတန်၏စစ်ပွဲသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါသည်။အကြောင်း အကျိုးကို အခြေခံ၍ တွေးခေါ်သော အယူဝါဒသည် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်နှင့်ပါတ် သက်နေပြီး ဒါဝီ၏အယူဝါဒသည် လူသားတို့ကို ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်နေသည်။ အပေါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်ဘာသာအယူဝါဒက၊ လူသည်ကယ်တင်ခြင်းကို မိမိဖါသာဖန်တီး ရယူနိုင်သည်ဖြစ်၍ ၎င်းသည်မာန်နတ်အပေါင်းအပါနှင့်ဩဝါဒပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ တရုတ်လူမျိုးသင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာတီမောသေလင်း မကြာခဏပြောကြားသည်မှာ၊ “၎င်းတွင် မာန်နတ်၏ခတ်ရင်းခွသုံးခုရှိသည်ဟုဆို၏” ၎င်းတို့မှာ၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ဝေဖန်ခြင်းတရွေ့ရွေ့နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားနှင့် အပေါ်ယံဆန်ဘာသာတို့ပင်ဖြစ် ပါသည်။
“ဝိညာဉ်တော်သည် အတည့်အလင်း၊ ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကား၊ နောင်ကာလ၌ ဩတ္ထုပ္ပစိတ်တွင် သံပူခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင် မုသာစကား ကိုပြောတတ်သော သူတို့၏ဟန်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် လူအချို့တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍ လှည့်ဖြားတတ်သောဝိညာဉ်တို့၌၎င်း၊နတ်ဘုရား တို့နှင့်စပ်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်း၊ မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်”(၁တိ၄း၁)၊
“ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ ရွှင်လန်းကြလော့။ မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ Rmန်နတ် သည်မိမိအချိန်တခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသော ဒေါသအမျက်နှင့် တကွသင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟုဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏”(ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၂)။
၂။ ဒုတိယ၊ သင်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်မာန်နတ်သည် မာန်နတ်၏မှားယွင်းသော ဩဝါ ဒနှင့်ပရိယာယ်ကိုကို အသုံးပြုနေပါသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက စာတန်မာန်နတ်အား “သူ၏အကြံအစည်များကို ငါတို့ သိကြ၏”(၂ကော၂း၁၁)ဟူ၍ပြောကြားထားပါသည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား စာတန် သည်သူ၏ “ပရိယာယ်”ကို အသုံးပြုပြီးသင့်ကို သွေးဆောင်ပြီးငရဲသို့ ဆွဲခေါ်နေသည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ယေရှုက ဖါရိရှဲတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“သင်တို့သည် သင်တို့၏အဘတည်းဟူသော မာန်နတ်မှဆင်းသက်ကြ၏။ သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်း လိုက်တတ်ကြ၏။ မာန်နတ်သည်ရှေ့ဦးစွာ ကစ၍ လူအသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏’ ‘(ယောဟန်၈း၄၄)။
စာတန်သည် ဘုရားသခင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ မတတ်နိုင်ချေ၊ ထို့ကြောင့် ပြင်းစွာသောအမျက် ဒေါသဖြင် ဘုရားသခင်၏ဖန်းဆင်းသော လူကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “သမ္မာသတိရှိ လျှက်မအိပ်ဘဲ စောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ရန်သူမာန်နတ်သည် ဟောက်သောခြသေ့Fကဲ့ သို့အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏”(၁ပေ၅း၈)။ နောက်ဆုံး သောကာလသို့ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ စာတန်သည် လူအပေါင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့ရန် ချဉ်းကပ်နေသည်။
“ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့် ကောင်ကင်းသားတို့ရွှင်လန်းကြလော့။မြေကြီး နှင့်ပင်လယ်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ Rmန်နတ်သည် မိမိအချိန်တခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသော ဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟုဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏” (ဗျာဒိတ်၁၂း၁၂)။
သင့်အားဖျက်ဆီးဖို့ရန် အသုံးပြုနေသော “မာန်နတ်၏ပရိယာယ်”သည် “မာန်နတ် ၏ဩဝါဒ”ပင်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုအပြစ်သို့သွေးဆောင်ပြီး ငရဲထိတိုင်ဆွဲခေါ်နေသော မာန် နတ်၏ဩဝါဒဆိုင်ရာပရိယာယ်ကို စာတန်အသုံးပြုနေသည်။
၁။ မာန်နတ်သည် သင့်အားဆမ်လာကဲ့သို့ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တွေးတော သောဝါဒီဖြစ်စေလိုသည်။ ဖေါ်ပြပါ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ်သံသယပျံ့စေလို သည်။ “ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါပညာ ကိုပေးနိုင်သော ဓမ္မကျမ်းစာကို ငယ်သောအရွယ်မှစ၍လေ့ကျက်သည်ကို ၎င်း”(၂တိ ၃း၁၅)၊ သမ္မာကျမ်းစာ၌၊မိန့်တော်မူသမျှကို သက်ဝင်ယုံကြည်ဖို့ စာတန်မလိုလားပါ၊ ဘုရားသခင်သင့်ကိုချစ်နေသည်ကို စာတန်မကြိုက်မ နှစ်သက်ချေ။ “ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ၊ ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူပြီ”၊(၁တိ၁း၁၅)ဟူသော သမ္မာကျမ်းတော်ကို မယုံကြည်လိုချေ။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုကို မကိုးစားစေလိုပြီ။ ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်း သင့်အားမရရှိစေလိုပါ၊ မာန်နတ်သည် သင့်အား ဒါဝီအယူစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်စေလိုသည်၊ သင်သည်အာဒံထံမှဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်သည်ကို မကိုးစားစေလိုပြီ။ ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်း သင့်အားမရရှိစေ လိုပါ။
၂။ မာန်နတ်သည် သင့်အားဒါဝီအယူစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်စေလိုသည်၊ ဥင်သည် အာဒံထံမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်၍ အပြစ်ဗီဇစွဲကပ်နေသူဖြစ်သည်ဆိုခြင်း ကိုလည်း မယုံကြည်စေလိုပါ၊ “ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်တွင်၊ ခရစ်တော် သည် ငါတို့အတွက်အသေခံတော်မူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအ ဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏” ဟူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို မယုံစေလိုပါ၊ (ရောမ ၅း၈)။
၃။ မာန်နတ်က သင့်အား “အပေါ်ယံဆန်ဘာသာရေးသမားတဦးဖြစ်စေလို ပြီး၊ သင်၏ထာ၀ရကယ်တင်ခြင်းကို သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရယူနိုင် ပါသည်”ဟူသော ဖိုင်နီးကဲ့သို့ဖြစ်စေလိုပါသည်။ ဖီးတီ၊မကောင်းဆိုးဝါး ပလေဂျီယံ၊ လမ်းမှားစေသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော မာန်နတ် ၏ဩဝါဒကို ရွံ့ရှာအထင်သေးပါသည်။”ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူး တော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်အလိုအလျှောက်ရောက် သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း၊ ကိုယ်ကုသိုလ် ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်၊ သို့ဖြစ်၍အဘယ်သူ မျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ” (ဧဖက်၂း၈-၉)ဟူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို သင့်အားမယုံကြည်စေလိုပါ။ “အပေါ်ယံဆန်ဘာသာရေးသမား”တို့ကဲ့ သို့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော် ကြောင့်ကယ်တင်ရရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုခြင်းကိုစာတန်မုန်းတီးနေသည်။
သို့သော်လည်း နုတ်ကပတ်သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့။ မာန်နတ်ကို ကိုဆီးတားကြလော့။သို့ပြုလျှင်၊ သူသည်သင်တို့ထံက ပြေးသွားလိမ့်မည်” (ယာကုပ် ၄း၇)။
ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီး စာတန်၏လိမ်လည်မှုကို တိုက်လှန်ဆီးတားကြပါ။ သခင်သည် သင့်အားချစ်နေသည်။ သင့်အပြစ်ကြွေးများပေးဆပ်ဖို့ ကပ်တိုင်ပေါ် သင့်အ စားအသေခံပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ သခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံတွင် ခံပယ်တော်မူသည်။
“ထို့ကြောင့် အကြင်သူတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်အထံတော် သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏ ထိုသူတို့၏အမှုကို ကိုယ်တော်သည် စောင့်လျှက်၊ကာ လအသက်ရှင်အသက်ရှင်သောကြောင့်၊ သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှါ တတ်နိုင်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ ၇း၂၅)။
ယေရှုသည်သင့်အား “လုံးလုံးလျားလျားကယ်တင်ရန်တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အား အပြစ်နှင့်ငရဲမှ ရွေးနုတ်ကယ်တင်ပိုင်သောအရှင်သခင်ဖြစ်ပါသည်။ “ကိုယ် တော်မြတ်ကိုသာ ယုံကြည်ပါ၊ ယခုယုံကြည်ပါ၊ သင်၏အပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်၊ ယခု ကယ်ချွတ်မည်” ဟူ၍ ဓမ္မသီချင်း၌ ရေးသားသီကုံးထားပါသည်။ ယေရှုသင့်အား၊ “မာန် နတ်၏ဖန်မိရာမှ လွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကောင်းရောက်မည်”(၂တိ ၂း၂၆)ဟူ၍ နုတ်ကပတ် တော်ရှိပါသည်။ စာတန်မာန်နတ်အပေါင်းအပါတို့၏ လက်မှယေရှုသည် လွတ်မြောက်စေ သည်သာမကဘဲ၊ သင့်၏အပြစ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်နိုင်သဖြင့် ယေရှုသခင်ကို အားကိုးယုံ ကြည်လိုက်!
(၁၈၈၀-၁၉၅၅ခုနှစ်) ဟိုမားရိုဒီဟီဗါသီကုံးရေးသားသော “ယေရှုကြွ လာ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သင်းအုပ်ဆရာမှ ပြင်ဆင်သီဆိုပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသူဖြစ်ပါလျှင်၊ ယခုပင်ယေရှုကို ယုံ ကြည်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အနောက်ဘက်ခန်းရှိ ဒေါက်တာကေကန်ဆီသို့ သွားကြပါ၊ သူ သည်သင့်တို့အား တိတ်ဆိတ်သော အခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး၊ ဆုတောင်းခွန်းအားပေး ပါလိမ့်မည်။(သူတို့သည်သွားကြ၏)
ယုံကြည်သူတို့အဖို့ နုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု ၍(ဧဖတ်၆း၁၁-၁၂)ကို ဖွင့်ထားကြပါ။
“မာန်နတ်၏ပရိယာယ်တို့ကို ဆီးတားနိုင်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင်ပြင် ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကို ဝတ်ဆောင်ကြလော့။ အကြောင်းမူကာ ငါတို့သည် သွေးသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မ ဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင် မိုက်၌ အစိုးတရပြုလုပ်သော မင်းတို့နှင့်လည်း၎င်း၊မိုးကောင်းကင်၌နေ သော ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏။” (ဧဖက် ၆း၁၁-၁၂)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မာန်နတ်နှင့်အပေါင်းအပါတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အသင်းတော်သည် ဝိညာဉ်စစ်ပွဲ၌ နစ်မြှပ်နေ သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်”ဟူ၍ ပြောကြားလိုပါသည်။ (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume V, p. 280; note on Ephesians 6:12). ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် စာတန်မာန်နတ်ကို တိုက်လှန်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
မာန်နတ်ကိုတိုက်လှန်ဆိုင်ပြိုင်၍ အနိုင်ယူခြင်းကာ၊ အဘယ်နည်း?ဆုတောင်းခြင်း အားဖြင့်ဖြစ်သည်! အခန်းငယ်၁၈းကို ဖတ်ကြပါ။
“ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျှက် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းငှါအားမလျော့ဘဲလျှက်ငါမှစ ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ ဆုတောင်းလျှက်စောင့်ရှောက်ကြလော့” (ဧဖက်၆း၁၈)။
တရုတ်လူမျိုးနှစ်ရှည် သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ တီမောသေလင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင် ဒုတိယအကြိမ်ကြွရောက်လာတော့မည်နေ့ရက် မတိုင်၊ စာတန်မာန်နတ်၏ ဖိအားကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်” (The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, p. 96).
စာတန်မာန်နတ်၏တိုက်ခိုက်ခြင်းကို တွန်လှန်နိုင်ဖို့ အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌လည်း ဆုတောင်းခြင်းကို မမေ့မလျှော့ကြပါနှင့်၊ ဝိုင်းဝန်း ဆုတောင်းခြင်းသည် စာတန်ကို တိုက်လှန်နိုင်ရန် ကြီးမားသောခွန်အားပင်ဖြစ်ပါသည်! အာင်မင်
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂိရိတန်အယ်ချန်မှ ၁ပေ၅း၆-၉အထိ ဖတ်ကြားပေး သည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၈၀-၁၉၅၅ခုနှစ်)
“ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ ရွှင်လန်းကြလော့။ မြေကြီး နှင့်ပင်လယ်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကား၊ Rmန်နတ်သည်မိမိအ ချိန်ခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ ပြင်းစွာသောဒေါသ အမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ ရှိရာသို့ ဆင်လေပြီဟုဆိုကြသည်ကို ငါကြား၏” (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၂)။
၁။ ပထမ၊ မာန်နတ်သည် သူ၏အယူဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားထဲ ပျံနှံ့စေသည်၊ ၁တိ၄း၁၊
ယုဒ ၃၊ ၂တိ၄း၄၊ ကမ္ဘာဦး၃း၁၊ ၂တိ၃း၁၆၊ ကမ္ဘာဦး၂း၇၊ ရောမ၅း၁၉၊
ဧဖက် ၂း၄-၅၊ ၈-၉၊
၂။ ဒုတိယ၊ သင်တို့အားဖျက်ဆီးဖို့ရန် မာန်နတ်သည် မှားယွင်းသောဩဝါဒနှင့်ပရိယာယ် ကိုအသုံးပြုနေပါသည်။
၂ကော၂း၁၁၊ ယောဟန်၈း၄၄၊ ၁ပေ၅း၈၊ ၂တိ၃း၁၅၊ ၁တိ၁း၁၅၊ ရောမ၅း၈၊
ဧဖက်၂း၈-၉၊ ယာကုပ်၄း၇၊ ဟေဗြဲ၇း၂၅၊ ၂တိ၂း၂၆၊ ဧဖက်၆း၁၁-၁၂၊၁၈